भाउजुलाई गर्दा स्वर्ग देखेको त्यो रात : भाउजुले भनिन भित्र-भित्रै मज्जाले ठेल्नुहोसन् बाबु ||::आर एम खबर
भाउजुलाई गर्दा स्वर्ग देखेको त्यो रात : भाउजुले भनिन भित्र-भित्रै मज्जाले ठेल्नुहोसन् बाबु ||
बाबु अझ भित्रै, भाउजूले काम्दै भनिन्…देवर भाउजुको रोमान्टिक यौन कथा
यस वेबसाईटमा पोस्ट हुने सम्पूर्ण कथा तथा बिषयवस्तु कल्पनिक हुन् , कुनै पेसा , मान्छे , धर्म , समन्धलाई असर पुराउन लेखिएको होइन । अनी कुनै ठाउँ , वर्ग , जाती लाई हानी पुराउन खोजिएको पनि हैन । कसैको जिन्दगीमा मेल खान गए मात्र सम्योग हुनेछ । यदी कसैलाई चोट पर्न गएमा माफ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौ। अनी यो वेबसाईट मा भएका सम्पूर्ण कथा हरु १८ बर्ष भन्दा माथिका दर्सक हरुको लागि मात्र हो । त्यो भन्दा कम उमेर हुने हरुले कृपया नहेरिदिनु होला । साथै अरु धेरै कथा पढ्न हाम्रो वेबसाईट www.merokatha.site आफ्नो कम्प्युटर बाट हेर्न सक्नु हुनेछ र मोबाईल बाट Slide गरेर अर्को कथा पढ्न सकिने छ । कसैसँग यस्तै कथा भएमा
नमस्कार म राज (नाम परिवर्तित ) । म आज आफ्नो लाइफको अविस्मरणीय क्षणको बारेमा भन्न जाँदै छु त्यो हो मेरो मिल्ने साथीसग गरेको सेक्स । मेरो गर्ल फ्रेन्ड त चेन्ज भै’राख्छन् तर साथी भने कहिले चेन्ज हुदैनन् । त्यस्तै मेरो एउटा केटि साथिको नाम हो नीलम । नीलम हेर्दा सानी , गोरी र सार्है मिलन्सार थिइ । उ मेरो घर रूममा आउने जाने गर्थी तर हामी साथी मात्र थियौं । कहिलेकाही म पनि उस्को रूममा आउने जाने गर्थें ।
एकदिनको कुरो हो म आफ्नो घर जानको लागि बसको टिकट काटेको थिए । बस बिहानको ५:३० बजेको थियो त्यसैले मलाई गङ्गबु बस पार्क त्यति बिहान पुग्न असम्भव थियो । अनि मैले नीलमलाई फोन गरेर मेरो समस्या बताए । नीलमले पनि उस्को रूम बसपार्क नजिक भएकोले उसको रूममा बस्न भनी र साझको खाना पनि उसकै रूममा खानी भनी । मैले हुन्छ भने र साझ ५ बजे तिर उसको रूममा पुगे । उ सधा झैँ रूममा किताब खोलेर पढी रहेकी थिइ । म गएको देखेर किताब बन्द गरेर मसग कुरा गर्न थाली । कुरा गर्दागर्दै ७ बजि सकेको थियो । अब खानाको ब्यबस्था गर्नु पर्ने थियो । मैले फ्रेश हाउसमा गएर आधा किलो चिकेन लिए र दुइटा रेड बुल पनि ।
हामी दुबै +२ पढ्नेविद्यार्थी भएकाले र राम्रो घर परिवारको भएकोले पनि रक्सी खाने गर्दैनौ । म मासु लगेर रूममा पुगे । उसले मासूका लागि मसला तयार पारी सकेको थिइ । दुबैले मिलेर खाना तयार पार्यौ र एक छिन पछि मिलेर खायौं । ९ बज्न लागेको थियो । मलाई भोलि बिहान छिटो उठ्नु पर्ने भएकाले म सुत्ने तयारी गरे । उ एक्लै बस्ने भएकाले एउटा मात्र बेड थियो । म भुइँमा सुत्छु र उ बेडमा सुत्ने भने तर उसले मानिन । जाडोको महिना थियो त्यसैले भुइँ चिसो हुन्छ भनेर उस्ले मलाई भुइँमा सुत्न दिइनी र उस्ले एउटै बेडमा दुबै जनाको लागि बिस्तारा तयार पारी । जाडो भएकाले हामी दुइटा सिरक खपाएर दुबै जनाले ओढेका थियौं ।
म जिन्स् पाइन्ट सग सुतेको थिए तर उ भने नाइटी लगाएर । एउटै सानो बेड भएकाले उस्को र मेरो शरीर एक अर्कालाई छोइ रहेको थियोे । रात बित्दै गयो र सायद ११ बजे तिर नीलमले आफ्नो एउटा हात मेरो छाती माथि र अर्को हात मेरो पाइन्ट माथी रखेको थिइ । मैले त्यस्लाइ इग्नोर गरेको थिए । केही छिन पछि उसले मेरो पाइन्ट भित्र हात लगेर सुम्सुमाउन लागि । मलाई अप्ठ्यारो महसूस भयो र उसलाई सोधे,” नीलम , यो के गरेको?”
उसले भनी ,” मैले तिमिलाई माया गर्छु ” भनी । म अचम्म परे ।
उ:- “हो नि । तिमी नै एउटा मान्छे हौं जस्लाई मैले बिश्वास गर्छु । मलाई थाहा छ कि यदि हामिले सेक्स गर्‍यौ भने तिमिले यो कुर गोप्य राख्ने छौँ ।”
मैले पूरा वाक्य भन्न न पाउदै उसले मलाई किस गर्न थाली । एक छिन त मलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो तर पछि मैले पनि उसलाई साथ दिन थाले । उसको रसिलो ओठले मेरो ओठलाई आफू तिर खिची राखेको थियो । मुख भित्रभित्रै हामिले माया साटी रहेका थियौं । १५ मिनेटको किस पछि उसले आफ्नो नाइटी खोली अनि मैले पनि आफ्नो पुरै कपडा खोले । उसले रातो ब्रा र पेन्टी लगाको थिइ जसलाई देखेर मेरो लाडो थन्किएको थियो । थन्केको मेरो लाडो देखेर उसले एकाएक मेरो लाडो माथी आक्रमण गरि । आईस क्रिम खाए जसरी उसले मेरो लाडो मजाले चुसी रहेकी थिइ । यो कार्य मेरा लागि नौलो थियो तर उ भने अनुभवी जस्तै गरेर चुसी रहेकी थिइ।मैले उसलाई एउटा प्रश्न गरे ,” तिमी भर्जिन हौं कि नाई?”
उसको पुति गुलाबी रङ्गको थियो जसलाई देख्न बित्तिकै म झन् बढि उत्तेजित भए । उसलाई म तिर तानेर उसको पुति वरिपरि जिब्रोले चलाउन थाले । उ सानो आवज निकालेर आफ्नो सन्तुष्टि जनाई रहेकी थिइ । उसको पुतिमा मैले बिचको औंला सुस्तरी छिराए । उसको पुति चिप्लो भैसकेको थियो । उसले पुति भित्र छिटो लाडो हाल्न संकेत गरि । म पनि आफ्नो ७ इन्चको लाडो उसको पुति वरिपरि लडाए । उ तड्पिइ रहेकी थिइ । मैले आफ्नो लाडो उस्को पुतिको दुलोमा मिलाएर राखे र सुस्तरी धक्का दिन थाले । तर यसो गर्दा लाडोको रातो टुप्पो मात्र भित्र गयो । अनि मैले बल गरेर लाडोलाई झन जोडसित धक्का दिए ।
लगभग आधा लाडो भित्र गएको थियो । नीलम पिडामा कराउँदै थिइ र उसको पुति बाट रगत बगि रहेको थियो र यसले उ भर्जिन थिइ भनेर प्रमाणित गर्यो । मैले त्यही आधी लाडो भित्र बाहिर गरि राखेको थिए र फेरि एक्कासि मैले आफ्नो लाडोलाई जोडले धक्का दिए । अहिले चाहिँ पुरै भित्र चिर्यो र नीलम पनि जोर जोर सित कराउन थाली । बाहिर अरुले सुन्ला भन्ने डरले मैले उसलाई किसकिस खाए र शान्त पारे ।फेरि लाडोले सुस्त सुस्त धक्का लगाउन थाले र नीलम पनि अहिले साथ दिदै थिइ । उ बेड्मै पल्टेको थिइ र मैले माथी बाट लाडो पेलिरहेको थिए । उसले पनि चाक उठाएर मलाई साथ दिई रहेको थिइ। करिब २५ मिनेट पछि मैले आफ्नो लाडोबाट बिर्य झार्न लागेको थिए । उसले बिर्य पुतिमै झार्न भनी तर उ गर्भवती होलि भन्ने डरले लाडो बाहिर निकालेर नाइटोमा झारी दिए।
रात भरीमा मेरो उत्तेजना फेरि बढी सकेको थियो र दुबैले रमाउदै चिक्यौ । यो चोटि चाहिँ मैले बिर्य उसको ठुलो अनुरोध पछि पुति भित्र नै झारी दिए । पुति भित्र मेरो तातो बिर्य मैले आफै नै मेरो लाडोको सहयताले महसुस गरेको थिए । नीलम भने यो चोटि बिर्य भित्र झारेकोमा एकदमै खुसी थिइ र फेरि हामी १० मिनेट किस गरि रह्यौ । समय हेरेको ५ बजिसकेको थियो। हतार हतारमा कपडा लगाएर म पनि तयार भए र जान भन्दा अघि उसलाई फेरि एक लामो किस दिएर फेरि छिट्टै नै सेक्स गर्ने वाचा गरेर म बसपार्क गए । मुग्लिन पुगि सके पछि उसलाई फोन गरेर गर्भ रोक्ने औषधि खाउ भने तर उसले पहिले नै खाइ सकेको रहेछी र म ढुक्क साथ बसको सिटमा रातभरिको कल्पना गर्दै निदाए ।
यस वेबसाईटमा पोस्ट हुने सम्पूर्ण कथा तथा बिषयवस्तु कल्पनिक हुन् , कुनै पेसा , मान्छे , धर्म , समन्धलाई असर पुराउन लेखिएको होइन । अनी कुनै ठाउँ , वर्ग , जाती लाई हानी पुराउन खोजिएको पनि हैन । कसैको जिन्दगीमा मेल खान गए मात्र सम्योग हुनेछ ।
यदी कसैलाई चोट पर्न गएमा माफ गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौ। अनी यो वेबसाईट मा भएका सम्पूर्ण कथा हरु १८ बर्ष भन्दा माथिका दर्सक हरुको लागि मात्र हो । त्यो भन्दा कम उमेर हुने हरुले कृपया नहेरिदिनु होला । साथै अरु धेरै कथा पढ्न हाम्रो वेबसाईट आफ्नो कम्प्युटर बाट हेर्न सक्नु हुनेछ र मोबाईल बाट Slide गरेर अर्को कथा पढ्न सकिने छ । कसैसँग यस्तै कथा भएमा दिन सक्नु हुनेछ। कथा दिदा पात्रको नाम परिवर्तन गरेर दिनुहोला ।
साथै योन कथा लेखेर घर बसी बसी महिना को ३० हजार कमाउन चाहनु हुन्छ भनी हामीलाई संपर्क गर्नुहोस् । कथाका बिषयवस्तु हरु कल्पनिक हुनुपर्ने छ साथै कथा नेपाली फन्ट मा हुनु पर्नेछ । कम्तिमा पनि ५०० शब्द अनिवार्य हुनु पर्नेछ । कुनै पनि वर्ग, धर्म तथा जातीलाई कथाको बिषयवस्तुले असर गर्नु हुँदैन ।
दिन मा कम्तिमा ५ वटा कथा लेख्नु पर्नेछ । जती धेरै कथा लेख्न सकियो त्यती धेरै तलबको बेवस्ता गरिएको छ । दिन को एउटा कथा पनि पठाउन सकिन्छ । एउटा कथालाई कम्तीमा १०० रुपैयाँ दिइने छ । कथा कुनै पनि वेबसाईट बाट कपि गरेको हुनु हुँदैन । कपि गरिएको कथा बाट हामीलाई कुनै पनि आम्दानी हुँदैन । त्यसैले कथा लेख्दा आफ्नो क्षमता प्रयोग गर्नुहोला । जस्ले काम गर्न चाहनु हुन्छ कृपया एउटा आफ्नो कथा शाहीत फोन नम्बर मेल गर्नुहोला । हामीले कथाको बिषय वस्तु हेरेर तपाईंलाई संपर्क गर्ने छौ ।
आज म तपाईंहरु समक्ष मेरो यौनको पहिलो अनुभुती राख्न गैरहेको छु दोश्रो त शायद पढि सक्नु भयो होला । चिकारु मामा यसलाई पनि स्विकार गरिदिनु हुन्छ भन्ने आशा लिएको छु । यो मेरो यौनको पहिलो सक्षत्कार हो । त्यस ताका म १८ बर्षको थिए, कलेज पढन पहाडबाट मधेश झरेको, हट्टाकट्टा जवान थिए, डेरा बस्न थाले पल्लो कोठामा पनि म सँगै पढने साथी र उनको मुमा र बहिनी बस्थे । चिन्जान पछी अलिक घनिश्टता बढन थाल्यो । बुबा काठमाडौं तिर जागिरे थिए । त्यसले गर्दा कहिले काही चाडपर्वमा आउनु हुन्थियो । यसरी नै साथीको परिवार सँग हिमचिम बढनु थाल्यो ।
यसरी नै दिन बित्न थाल्यो एक दिन अचानक साथीको बाबाले उनलाई काठमाडौं बोलाउनु भयो उनको बाबाले काठमाडौंमा हाकिमलाई भनेर जागिर मिलाउनु भएछ । त्यसैले पढदै जागिर खान, उ आमा बहिनीलाई छाडेर काठमाडौं तिर लाग्यो ।
अब बिहान बेलुकी पढने साथी पनि छुट्यो, मलाई एक्लोपन महसुस भयो । उनको बहिनी अनु पनि कक्षा ८ मा पढथिन । त्यसैले बिहान् बेलुकी नजानेको कुरा सिकाउने जिम्मा मेरो काधमा आयो । म कसरी नकर्न सक्थे । अनु एक त स्कुले र उनको आमासँग दोकान भएकोले प्राय बिहान बेलुकी मात्रा भेट हुन्थियो । अनु पनि बिहान बेलुका सिकाइ दिनु भन्दै मेरो कोठामा आउथिन । म न जानेको कुराहरु सिकाइ दिन्थिए । अनी कहिले काही जिस्काइ दिन्थे ।
शायद पहिला किन मेरो नजर पुगेन ? शायद मेरो गिद्दे दृष्टिल नपरेको हुन सक्छ । उनी पनि तरुनी भै सकेकी थिइन । कालो वर्णकी, मोती झै दात मिलेको, काटेको कपाल हाँस्दा खल्टो पर्ने गाला, पुष्ट छाती उमेरको अनुपातमा अलिक ठुला थिए उनका अनार दानाहरु …. अब मेरो मनले उनलाई कु बिचारले हेर्न थाले छ ।
हरपल उनको प्रतिक्षा हुन थाल्यो मेरो मनमा छटपट्टी बढन थाल्यो । उनी सँग हरपल साथ रहन चाहन्थे । शनीवारको दिन थियो पानी अली अली परी रहेको थियो । त्यो दिन घरमा हामी दुई प्राणी मात्रा थियौ । आन्टी पनि दोकान जानु भएको थियो । एक्लो मौका पाएर म पनि उनको कोठामा पुगे तर उनी त्यहा थिइन । अनी न भेटे पछी पिशाब फेर्न सौचालय तिर लागे उनी त बाथरुममा पो नुहाउदै गीत गुनगुनाउदै रहिछिन । सौचालय र बाथरुम को एउटै भित्ता भएकोले गर्दा दुलोदालीबाट नुहएको देखिन्छ कि भनेर दुलो खोज्न थाले दुलो कही थिएन ।
सौचालयबाट निस्केर ढोकामा छ की दुलो भनेर खोज्न थाले एउटा भेटाए । त्यहीबाटै चिहाउने बिचार गरे र त्यहा बाट चिहाउन मात्रा के खोजेको थिए ढोका खुल्यो । उनी माथि लड्न पुगे । के गर्नु भएको भन्दै अनु चिचाइन म लाजले रातो पिरो भए मेरो वाक्य फुटेन । उनले आफुलाई टावेलले मात्रा बेरेकी रहिछिन त्यसैले उनको टावेल खुस्के छ, अनु निर्ब्रस्त्र भइन र हतार हत्तार आफ्नो गुप्ताङ हातले छोप्न थालिन । अनु लाजले रातोपिरो भएकी थिन ।
त्यहा मौनता छायो । आफुलाई सम्हाल्दै म उठे । म कोठा तिर लागे र अनु कता लागि थाहा भएन । कोठामा पुग्दा मेरो शरीरमा करेन्ट लागेको थियो, अलिकती पनि पश्चताप थिएन । सम्झन थाले त्यो पल उनको निर्वस्त्र शरीर पुष्ट छाती अनी गुप्ताङमा अली अली पलाएको रौ अनी उनको स्पर्श अनी उनको शरीरबाट निस्केको मदहोस वासना मेरो काम इच्छालाई जगाइ रहेको थियो । यो मेरो पहिलो अनुभब थियो त्यसैले म मख्ख थिए । यसो मेरो लिङ छामेको त लिङले पानी फाली सकेको रहेछ केही अगाडि मेरो फुलिएको लिङ, तिग्रालाई सिरानी हालेर सुती सकेको थियो ।
म शिथिल भै सकेको थिए । म पनि अनुको गुप्ताङमा छिराउन पाए कस्तो हुन्थियो, भन्ने कल्पना गर्दै खाटमा ढल्के । अनु बेलुकी पनि मेरो नजिक परिन । पढन पनि आइन, मलाई देख्ने बितिकै भाग्न थालि देखे पनि लजाएर सिर निहुराउ थिन ।
यसरी नै केही दिन बित्यो । एक दिन अचानक प्रकट भइन मेरो कोठामा अंक गणित सिकाइ दिनु भन्दै, म पनि सिकाइ दिनु पर्यो भनेर सिकाउनु थाले । तर मेरो आँखा अनुको दुध तिरै थियो । म उनीबाट निस्किएको वासनामा हराउन थाले, झसँग भए दाई खै सिकएको त ? न निदाइ नै सपना देखन थालेछु ।
सायद अनुले पनि अनुभब गरिन होला मेरो ब्यथा म पनि पुन सिकाइ दिने निहु गर्दै मेरो घुडाले उनको दुधमा स्पर्श गर्न थाले । उनी पनि थाहा नपाए झै गरी रहिन । मेरो तनमन आन्दोलित हुँदै गयो, उनी रातोपिरो हुँदै गइन । यो नै शायद उनको मौन स्विक्रिती थियो या मेरो सोच ? यो म यकिन गरेर भन्न् सक्दिन ।
म उनलाई बिस्तारी सुम्सुम्याउन थाले । उनले आँखा बन्द गरी सकेकी थिन म झन आतुर भए मेरो ओठ उनको पिपलपाते ओठमा लगेर चुम्न थाले उनी पनि त्यसै गर्न थालिन यती बेला सम्म उनी मेरो बाहुपासमा कसिएकी थिन म लिन थिए उनलाई उत्कर्शमा पुर्याीउन उनी पनि मेरो अनुसरण गर्दै थिइन ।
मैले बिस्तारै बिस्तारै उनको दुध सर्ट बाहिरैबाट माडन थाले । त्यती बेला सम्म उनको फर्क फर्केर रातो पेन्टी देखिदै थियो अब मेरो हाथ उनको त्यो कोमल तिघ्रामा सल्बलाउन थाल्यो । उनको गुप्तान्ङको सुगन्ध आइरहेको थियो । म झन लठ् हुँदै थिए । उनको योनि छाम्नलाई मेरो हात उनको पेन्टी भित्र छिराए, उनको योनी रसाएको थियो । रौ अली अली भएको महसुस गरे अनी मेरो औंला उनको गुप्तान्ङ भित्र बाहिर गर्न थाल्यो, उनी शिथिल हुँदै मेरो काखमा लडिन ।
मेरो लिङ तेसै त ९० डिग्रीमा खडा भएको थियो ।
शायद मेरो लिङले उनलाई बिझाए छ अनी उनले पनि बाहिरबाटै लिङ सुम्सुम्एउन थालिन । तर उनको अनुहार पढदा लाग्थियो उनी मेरो लिङ उनको योनीमा पसाउन आतुर थिइन बिस्तारी बिस्तारी उनको सटको बटनहरु खोल्न थाले, उनको मुहार अझ मदहोस् देखिन्थियो । गुलाबी ब्रा लगाएकी रहिछन उनको दुध त्यस्मा उम्कौला झै गरेर कसिएको थियो सुम्सुम्यौदै त्यसलाई पनि खोली दिए गुलबी दुधका मुन्टा म तिरनै घोचौला झै ठाडो थियो । अब यवम रितले उन्को फर्क पेन्टी सबै फुकाले । अब उनी मेरो सामु निर्शत्र भइन उनको लजालु मुहार अनी झुकेको शिर मलाई असधैं मन पर्योउ अनी उनको योनीमा मेरो लिङ पसाउन आतुर थिए ।
म पनि फटाफट लुगा खोल्न थाले उनी टोलाएर हेरदै थिइन शायद मेरो लिङ्को आँकार देखेर झस्किन मैले के भयो भनेर सोधे ? तपाईंको त कत्रो ठुलो रहेछ हतियार भनेर झस्केको नि पुन मैले सोधे के तिमीले अरु सँग पनि यौन सम्बन्ध राखेको छौ छैन भेनेर शिर हल्लाइन पुन मैले सोधे अनी कसरी थाहा पएउत मेरो ठुलो छ भनेर उनले मेरो जवाफ दिन तर मेरो जिद्दीको अगाडि उनको केही लागेन दाईको सुत्दा देखेको मात्र हो ।अब म उनी माथि खप्टिए र बिस्तारि लिङ उनको योनीको मुखमा लगेर छिराए तर मेरो लिङको टुप्पो मात्र छिर्यो उनी
कराउन थालि अह्ह मरेनी अह्ह अह्ह अह्ह अह्ह अह्ह मैले लिङ निकल्नै पर्योा । अनी मैले मेरो लिङ मा थुक लगाए र पुन उनको योनिमा लगेर रखे चुम्न थाले उनको पिपल पाते ओठ यसो गदा उन म जोस आए छ अनी भन्न् थालि बिस्तारि छिराउनुन अनी मैले बिस्तारि बिस्तारि गर्दै मेरो लिङ लाई जोडले ढक्का दिए उनी डल्लो परिन मरेनी मेरे अह्ह अह्ह अह्ह दुख्यो भयो भन्न् थालि म कहाँ छडनेवाल थिए अझ जोड जोडले धक्का दिन थाले । शायद उनको पनि पिडा कम भए छ क्यर उनी पनि मुनी बाट साथ दिन थालि ।
यस्तै ४ -५ मिनेट पछी मेरो लिङ बाट पानी निस्कियो । मेरो ठेलाई कम हुँदै गयो । म उनी माथिनै खप्टिएर उनलाई किस गर्दै उनको दुधको मुन्टो खेलाउन थाले । म जान्छु भन्दै मलाई उनले खाटमा झारी उनी आत्ती खुन भन्दै यसो हेरेको त मेरो लिङको वरीपरी खुन लागेको रहेछ । झट्ट मेरो आँखा उनको योनिमा पुग्यो त्यहा पनि खुनको टाटोहरु थियो । उनी लुगा सम्हाल्दै लागिन ढोका बहिर तर हिडाइ अलिक फरक थियो